Tsy ny mpitandro filaminana no atahorana | NewsMada
Tsy ny mpitandro filaminana no atahorana
Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Tsy miova ireo fepetra ho an’ny faritra Analamanga, raha nohalalahana kely izany any amin’ny distrikan’i Toamasina I sy II, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, distrikan’i Moramanga. Na izany aza, ho hentitra kokoa ny fampiharana ireo fepetra? Hanao ahoana?
Fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana izay, ho hita eo ny fampiharana. Ny tsy azo lavina, saika tsy mba manam-paharetana ny Malagasy rehefa manao zavatra. Na am-boalohany ihany no tena manao zavatra tsara sy matotra. Rehefa elaela, mivaha ho azy izany ary miharatsy aza. Am-boalohany ihany…
Tsy amin’ny fampanajana sy fanajana lalàna ihany izay fahazaran-dratsy izay fa na amin’izay atao andavanandro aza eo amin’ny maro: fanondranana entana, ohatra, asatanana, varotra… Hanao ahoana àry ity hoe ho hentitra kokoa ny fampiharana ireo fepetra iadiana amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao?
Tsy vitan’ny hoe mivahavaha ihany tsinona ny fampanajana sy fanajana ireo fepetra amin’izany fa efa tena gaboraraka tanteraka. Na eny an-tsena izany, na eny an-dalambe, na any anaty fiara fitaterana… Ho an’ny sasany, toy ny hoe tsy misy inona iny: tsy misy ny aretina, tsy misy ny ady atao amin’izany.
Tsy ny aretina loatra no atahorana, fa ny mpitandro filaminana: sao voasazy ny tena? Izay no anisan’ny nampiparitaka haingana be sy mora foana ny tsimokaretina tany amin’ny distrikan’i Toamasina I sy II talohaloha teo; avy eo, eto Antananarivo sy ny manodidina indray izay firongatry ny tsimokaretina izay amin’izao.
Toa tsy ny aretina no atrehin’ny sasany fa ny fangalam-piery amin’ny mpitandro filaminana. Rahoviana vao ho kolontsaina mahamendrika ny fampanajana sy fanajana lalàna? Mba tsy ho am-boalohany ihany… Raha tsy izany, tsy ho resy ny aretina. Anaovana fangalam-piery amin’ny tsy fanarahan-dalàna efa ho lava.
Fotoana izao anaovana ny ny fomba fisaina sy fiaina: tsy ny lalàna sy ny mpitandro filaminana hanasazy amin’izany no ndeha atahorana fa ny aretina sy ny loza?